Indlela ukuze alulame idatha elahlekile esuka Western Digital Passport My?
Uma kusula amanye amafayela ezibalulekile noma nje ihlelwe WD wakho My Passport nge iphutha, noma ezilahlekile amafayela akho ngenxa kanzima disk inkohlakalo noma igciwane attack. Ungabi ukwethuka, landela lokhu mhlahlandlela lokulungisa idatha yakho nge Wonderhare Data Recovery Manje.
Ngaphambi izinyathelo Umhlahlandlela alulame, kufanele sinake kokunye: Once amafayela akho lost kusuka WD My Passport nanoma isimo, sicela bayeke besebenzisa khona ukusindisa noma yimaphi amafayela amasha. Once amafayela amasha ngaphezulu eyodwa yakho endala, Amafayela akho Kunzima kangaka ngempela ezithathwe emuva.
Manje, download Wondershare Data Recovery and uyifake
Isixwayiso: MUSA ukufaka lolu hlelo kuze kube ukwahlukanisa efanayo lapho wena lost idatha sokugwema overwriting it.
Manje, Ake zama alulame idatha yakho esuka WD Passport My.
Step 1, Khetha "Ifayela Lost Lokubuyisela" Imodi ukucubungula i-My Passport Data Recovery
Xhuma lakho Passport My nge computer, futhi lolu Recovery Data, uzobona iwindi enikeza 3 izindlela alulame ngawe uma ukhetha "Imodi Standard". Ungakhetha "Lost Ifayela yokuthola"Imodi ukuqala ekululameni.
Step 2, Khetha ukwahlukanisa of Passport My ukuskena yamafayela elahlekile
Manje, ungabona uhlu lwabo bonke ngemoto kanzima kwi computer yakho zihlanganisa WD Passport My. Kusele nje ukuba ukhethe idatha lost ukwahlukanisa of Passport My, bese uchofoze "Qala"Ukuze baqhubeke. Ungase futhi uphawu "Vumela Deep Scan"Ukuze uthole imiphumela scan kangcono.
Step 3, Amafayela Buka kuqala bese alulame kusuka WD Passport My
Lapho zithwetshulwa eqeda, ungabona wonke amafayela etholakele ayaboniswa kwi kwesokunxele amafasitela Uhlelo ngomshini & umzila. Ungathola hlola nabo ngamagama bese ukhethe ukuthi yini wena ukululama nge ngokuchofoza "Alulame"Inkinobho. Ungase futhi kuqala ifayela ovamile njengo BMP, Gif, PNG, JPEG, JPG, TIF, DOC, Docx, HTM, PDF, PPT, PPTX, RAR, XLS, XLSX, ZIP, njll. ngaphambi alulame.
Inothi: Lapho ululama amafayela, ungasindisi nabo ngalolu ukwahlukanisa efanayo lapho wena lost phambi. Khetha elinye ukwahlukanisa noma disk ukugcina kwabo.
Posted on March 5, 2013 May 9, 2015 Umbhali WillIzigaba alulame idathaAmathegi Fumana Data From WD Passport My, alulame idatha kusuka WD ephathekayo drive kanzima, buyisa idatha kusuka passport yami
Langaphambilini post Previous: Okulula Engakwenza Jabulela DVD Movie Samsung Galaxy S4
Next post Next: Indlela ukuqaqa amafayela elahlekile kusuka Seagate Backup Plus